ရည်မွန် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / ရည်မွန်
Category Archives: ရည်မွန်
NO! – Ma Nyinn Bar Net
Sorry for any inconvenience for my first time this upload. Thank you all. Download Link MediaFire
February 8, 2010 twozeeonezee အခွေ (တကိုယ်တော်) ရတနာ(No) ရည်မွန်3Comments
ရည်မွန် + ရေဗက္ကဝင်း – ရှုပ်ကုန်တော့မယ်
၀၁။ ရှေ့ဆက်နေခဲ့ – ရည်မွန် ၀၂။ ငိုကြွေးခဲ့သူ – ရေဗက္ကဝင်း ၀၃။ အမြင်တွေမှား – ရည်မွန် ၀၄။ ပြေးထွက်ချင်သူ – ရေဗက္ကဝင်း ၀၅။ အသည်းမခွဲသင့်ဘူး – ရည်မွန်+ရေဗက္ကဝင်း ၀၆။ အရင်လို – ရည်မွန် ( Feat – Ye Lay ) ၀၇။ ရှုပ်ကုန်တော့မယ် – ရေဗက္ကဝင်း ၀၈။ ပြန်လာခဲ့ပါ – ရည်မွန် ၀၉။ ဆုံးဖြတ်ချက် – ရေဗက္ကဝင်း ( Feat – Ye Lay ) ၁၀။ ဘယ်လိုရှင်းပြသင့်လဲ – ရည်မွန် ၁၁။ မယုံတော့ဘူး – … Continue Reading →
August 28, 2008 ME *MMA* အခွေ (အများ) ရည်မွန် ရေဗက္က၀င်း Myanmar Artist 1 Comment
ငယ်ချစ်ဦး – Female Album
၀၁။ ငယ်ချစ်ဦး ၀၂။ မိန်းကလေးအချစ် ၀၃။ နွေကျောင်းသူ ၀၄။ သူသိသွားပြီး ၀၅။ မြန်မြန်နမ်းပါပန်းကလေး ၀၆။ ရယ်မနေနဲ့ ဒါတကယ် ၀၇။ အချိန်တွေသာကြာနေလို့ ၀၈။ ဧဒင်ရဲ့အကြောင်း ၀၉။ မိုးရာသီထဲ
August 18, 2008 ME *MMA* အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စင်ဒီ ရည်မွန် ငယ်ငယ် ရေဗက္က၀င်း ချစ်သုဝေ Bambino Lဆိုင်းဇီ Myanmar Artist No4Comments